रोज राणाको ‘खलनायक’को सिक्वेल कस्तो होला ? - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
रोज राणाको ‘खलनायक’को सिक्वेल कस्तो होला ?
प्रकाशित: ७ पुष २०७६, सोमबार
काठमाडौं । करिब एक दर्जन चर्चित फिल्म बनाएका रोज राणा पछिल्लो फिल्मी नगरमा कतै चर्चामा छैनन् । तर उनी यो क्षेत्रबाट हराएका पनि छैनन्, फिल्म क्षेत्रभन्दा टाढा उनी रहन पनि सक्दैनन् । त्यसैले होला उनी यतिबेला भने आफ्नै निर्माणमा बनेको चलचित्र ‘खलनायक’ को सिक्वेल बनाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
डेढ दशक अगाडिको ब्लकबस्टर फिल्म ‘खलनायक’ को सिक्वेल निर्माणमा उनी यतीबेला जुटेका छन् । खलनायक २ को निर्देशन गोविन्दा सिंह भण्डारीले गर्दैछन् । यसअघि उनले ‘रणवीर’ निर्देशन गरेका थिए । यसमा उनको निर्देशकिय क्षमताको प्रशंसा भएको थियो । उनको कामबाट प्रभावित भएर निर्माता राणाले निर्देशक भण्डारीलाई ‘खलनायक २’ निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
माघ दोस्रो हप्ताबाट छायांकन सुरु हुने फिल्मको अहिले स्क्रिप्टलाई अन्तिम रुप लिने काम भइरहेको छ । ऋषि न्यौपाने निर्दे्शित फिल्म ‘खलनायक’ मा एक जमानाका तीन सुपरस्टार अभिनेता राजेश हमाल, विराज भट्ट र निखिल उप्रेतीको प्रमुख भूमिका थियो । तर, यसको सिक्वेलमा यी तीन अभिनेता नदोहोरिने निर्माता राणा बताउँछन् । उनी फिल्ममा अहिलेका चल्तीका अभिनेतालाई लिने तयारीमा छन् । तर कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा भने उनले कुरा भइरहेको भन्दै छ मात्र भने ।
‘खलनायक २’ का लागि खलनायकको भने टुंगो लागेको छ । फिल्ममा निर्माता रोज आफैं भिलेनको भूमिकामा देखिने भएका छन् । निर्देशकको आग्रहमा आफैं भिलेनको भूमिकामा देखिन लागेको उनले बताए । त्यसका लागि अहिले सुगठित शरीर बनाउन केही दिनदेखि जिम धाइरहेको छन् ।
मानुङ डाँडाँको प्राकृतिक सौन्दर्यमा चलचित्र ‘आर्या’को राष्ट्रियता झल्कियो